Izay laptop tokony hividy ho an'ny ankizy? - News Fitsipika
Izay laptop tokony hividy ho an'ny ankizy?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Izay laptop tokony hividy ho an'ny ankizy?” dia nosoratan'i Jack Schofield, fa theguardian.com ny alakamisy 5 Novambra 2015 09.31 UTC
Izahay Mieritreritra ny Hatao zanakay lahy na ny solosaina findainy ny kahie ny fahasivy fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Dia mila rindrankajy toy ny Teny, PowerPoint sy Excel, ary amin'ny fotoana mba hahazo an-aterineto Coding. I also think it would be a good idea if he could dock it so he can use a separate mouse and keyboard.
As far as I can tell from my annual visit to BETT (formerly the British Educational Training and Technology Show), most schools now use consumer-grade Android/Apple tablets and Windows laptops. Na izany aza, BETT 2015 showed a trend towards Windows 2-in-1 “detachables”, which is what I’d recommend.
A detachable (I made that up) dia Windows convertible izay iray mikasika-efijery takelaka plugs any an-kitendry Tsy nahafoy. Fantatra tsara ohatra dia ahitana ny Asus T100TAF sy Microsoft rehetra SURFACES. Dual miasa dia midika hoe sekoly Tsy voatery mividy Takelaka samihafa sy ny solosaina, raha Windows App Studio mahatonga izany mora ny mpampianatra mba hamoronana tsotra Windows 10 fampiharana tsy Coding.
Ny malemy rohy ao amin'ny solosaina dia ny miankina, ary ny olona dia afaka manamafy ny miankina amin'ny nanandra ny solosaina avy amin'ny efijery. Bad hevitra. In detachables, ny efijery dia matetika antoka ny mahery lasibatry, and the hinges look much less fragile. Tokoa, some detachable have no hinges – eg the Lenovo Miix 3 and the forthcoming Dell XPS 12 – but you can’t easily change the angle of the screen.
Noho izany manantena aho ny detachable mba haharitra ela kokoa noho ny nentim-paharazana solosaina, na ny convertible amin'ny 360-ambaratonga miankina.
Windows 10 tsy manana na iza na tablette fampiharana araka ny Android, na ny kalitaon'ny Apple iPad Apps, fa ny ankamaroan'ny faritra voasarona, ary ry zareo indrindra tombony maimaim-poana. Rehefa tsy misy Windows fampiharana, ianao dia mbola afaka mampiasa feno hery (tsara noho takelaka-toetra) tranonkala navigateur ary an-tapitrisany ny nentim-paharazana mihazakazaka Windows fandaharana. Koa, mazava ho azy, misy fomba maro mba hihazakazaka Android fampiharana amin'ny Windows PCs, toy ny BlueStacks ary AmiDuOS.
Solosaina ho an'ny ankizy
Ny fidirana-anivon'ny solosaina findainy ho an'ny ankizy dia ny HP Stream 11. Izany no tena matanjaka noho ny vidiny ambany (£ 169,97 ny £ 199,99), nefa tsy manana mikasika efijery, ary ny varavarana lamba dia tsy detachable.
Fa ny volana vitsivitsy lasa, ny mena HP Lay X2 10-n055na no ny angady ny detachables amin'ny £ 249,99. Tsy mahatsapa mafy orina kokoa noho ny taloha Asus T100TAF, manana fitendry tsara kokoa, ary ho mendrika efijery. Na izany aza, Asus Vao nanomboka ny T100HA, izay kokoa momba ny Lay X2 10, na ny Keyboard dia somary kelikely kokoa.
Ny Asus T100HA dia iray amin'ireo mpaninjara voalohany solosaina mba tsambokely Windows 10 preinstalled, ary Windows 8.1 milina ireo ankehitriny nanala avy ao amin'ny toeram-pivarotana. PC World, ohatra, dia mivarotra ny HP Pavilion X2 10 amin'ny Windows 8.1 for £ 199,97, dia toy izany no tsy ho gaga raha misy Windows 10 dikan hita tsy ho ela.
Aho teo aloha niraharaha ny Acer Switch 10 ary 11 satria vidiny kokoa - matetika £ 300 ny £ 350 - fa ny Switch 10E Mety ho mendrika ny fijerena £ 229,95. Ihany koa aho niraharaha ny Toshiba Satellite Tsindrio Mini, satria mieritreritra ny 8.9in lamba kely loatra. Fa raha ny Windows fampihebana toerana avo mandeha ampy, angamba fa tsy kely loatra ho an'ny ankizy. Mety ho afaka mampitaha ny amin'izay milina tamin'ny Asus T100HA ao amin'ny John Lewis fivarotana, ary John Lewis ahitana ny roa taona antoka.
Ireo rehetra ireo fidirana-sehatra roa-in-olona manana Atom-monina processors sy 2GB ny tena fahatsiarovana, miaraka amin'ny 32GB eMMC Flash fahatsiarovana Chip mba hanome fitehirizana. Izy ireo mazava ho azy fa ho tsara kokoa amin'ny 4GB ny fahatsiarovana sy 64GB ny fitehirizana, fa toy izany no sarotra milina ny mahita, ary lafo kokoa. Ny maimaika dia ny hametraka ny fanampiny 32GB na mihoatra fitehirizana amin'ny microSD karatra. Raha mividy roa-in-iray miaraka amin'ny Windows 8.1 ary hanatsarana izany Windows 10, hametraka ny karatra voalohany: iray amin'ireo milina 32GB grady aho fa tsy ampy ny toerana maimaim-poana mba hamita ny fametrahana.
Aho fa mihevitra ho manana ho £ 250 no tena ianao fa te-handany amin'ny solosaina ho an'ny ankizy. Raha te-handany tsy, hitady ny notapatapahina-vidiny Lenovo Miix 3. Telo volana lasa izay, Nividy iray vaovao ho an'ny £ 150, Fa androany aho £ 250 hahazo Asus T100HA fa tsy.
Panendry sy ny seranan-tsambon'i
Ny ankamaroan'ny solosaina hiasa miaraka amin'ny "maneran-" docking-peo, toy ny Plugable ud-3900, nefa tsy mieritreritra ianao mila ny. Ny ankamaroan'ny solosaina handefa anareo plug amin'ny USB ivelany na Bluetooth fitendry tsy mampiasa docking peo. Maro ireo maro loko kitendry natao manokana ho ankizy, sy ny maro mikasika-soratany Tutorials.
Na izany aza, ny Asus T100HA Manana vaovao USB Type C seranan-tsambo, izany dia mila kely adaptatera.
I mihevitra ianao mihevitra ny ho mpitantana ny rafitra ho an'ny zanakao ny solosaina findainy, ka omeo ny ankizy kaonty. Zavatra tsy mamela anao nametraka ny faritry, tsy mety hanakana tranonkala, nametraka taona faritry ny lalao, ary mamaritra ny vola (raha misy) dia afaka mandany an-tserasera. Afaka mifehy ny toe-javatra ireo lavitra avy account.microsoft.com/family.
Windows 8.1 ary 10 dia handefa mailaka anao isan-kerinandro firaketana an-tsoratra ny zanakao ny asa atao: Ahoana ny ora maro izy ny nampiasa ny PC, ny vohikala dia ny nitsidika, ary mandra-pahoviana izy nandritra ny toerana tena fampiharana. Tsy voatery mampiasa izany fanompoana izany - dia tsy voatery - saingy nivadika tamin'ny amin'ny toerana misy anao.
Misy safidy ara-barotra toy ny Magic Desktop, fa ny tena ho an'ny tanora ankizy.
Tokony midira ao amin'ny ny solosaina findainy tsindraindray, mampiasa ny mpitantana kaonty, mba hanamarina fa ny zavatra rehetra dia OK. Child tantara dia tsara tarehy antoka, ary Windows 10 dia havaozina ho azy, fa izany hevitra tsara ny mihevera ny zavatra, ary mihazakazaka fanampiny anti-otrik'aretina taratasim-bola.
Ampirisiho ny zanakao lahy mba hamonjy antontan-taratasy, sary sy antontan-taratasy hafa ny Microsoft ny maimaim-poana kaonty OneDrive-tserasera fitehirizana, ary / na ny SD tsianjery karatra. Afaka vetivety ny mifamadika ny karatra ny ny PC mankany aoriana azy sy ny hametraka sary, toerana tena mozika raki-daza, Lahatsary YouTube sy ny votoatiny.
Misy dikan-maimaim-poana ny Microsoft Office fandaharana in OneDrive, ary afaka mametraka ny sasany ho maimaim-poana avy amin'ny Windows fampiharana Store. Tsy mino aho fa mendrika ny mividy na fametrahana ny biraonao manontolo fandaharana mandritra ny 9 taona, raha tsy efa famandrihana Office 365 Home. Izany dia manome ny Office feno tariny dia ho an'ny olona dimy ao amin'ny PCs, Macs, Takelaka sy ny finday avo lenta, miampy ny terabyte ny fitehirizana isaky ny mpampiasa, fa £ 79,99 isan-taona. Raha tsy izany, LibreOffice dia maimaim-poana hafa.
Azonao atao ihany koa mialoha hametraka Minecraft toy ny fandaharana na ny App, ny Scratch fandaharana tontolo iainana - mba jereo kely Ny fanombohana amin'ny Scratch voalohany - ary Khan Academy. Azonao atao ny miboroaka ireo sy ny fandaharana hafa ho amin'ny taskbar, na nametraka sary masina eo amin'ny biraonao, mba hahatonga azy ireo ho mora kokoa ny hahita.
Efa nahazo fanontaniana iray hafa ho an'ny Jack? Email izany ny Ask.Jack@theguardian.com
34616	1 Article, Anontanio Jack, Computing, Toetoetra, Jack Schofield, Solosaina
← Apple TV famerenana (2015) [VIDEO] Ny Appliances, no mandroba ry jamba, Manohitra! →